Bokinny Mpaminany 12
Sakramentanny fivalozana sy ny fampihavanana
Sakramentan ny filaharana
Toekaren i Gabôna
Fahagagana nataoni Jesoa
Evanjely arabonny Fahazazana
Filazantsara araka ani Joany
Tetiandro manara-bolana sy masoandro
Masoandro Tsy Resy
Ny kadobo na ny kapasitaoro dia fototra ampahany elektronika, izay mifampianjady tanteraka ary sarahan-javatra tsy mampita aratra. Ny tondrony reniny dia mitahiry angovon’aratra eo amin’ny velaran’ny mpampita arany. Ny sanda faratmpony dia mianki ...
Ny mpampita tapany dia zavatra manana tondro izay eo anelanelanny mpampita aratra toy ny vy ary ireo zavatra tsy mampita aratra toy ny fitaratra. Anisanny tondro anananny mpampita tapany ny fiovanny fampitany aratra aminny alalanny fanampiana lot ...
Ny roalahiny, na diôdy dia mpiorina haikoriam-boanaratra. Mpiorina tsy lineary izy io ary tsy mifandrify, izany hoe tsy mandeha ilay izy raha vao avadika ny fidirana ary ny fivoahanny rianaratra. Maromaro ireo mpiorina izay mitondra izay manana f ...
Daewoo dia vondrona indostrialy koreanina tatsimo noforonini Kim Woo-chong. Ireo vala ahitana ani Daewoo dia ny fanamboarana sambo, ny trano, ny fitaovam-piadiana, ny fitaovan-tokatrano mampiasa aratra, ny haikoriam-boanaratra ary ny fiarakodia. ...
Ny flip-flop, dia olikaratra lôjika manana fivoahana roa ary manana fidirana tokana na maro. Ny fivoahana dia mety 0 na 1. Miova arakaraky ny fidirana ny aratra mivoaka. Ny mahasamihafa ny flip-flop dia izareo mitazona ny toetrany rehefa tsy misy ...
Ny zitina mifamadibadika dia ahafahana mitondra ny angôvonaratra lavitry ny toerana niforonany. Ny angôvo very aminny fitondrana angôvo aminny alalanny zitina miherina dia kely kokoa nohonny fitondrana aminny alalanny zitina mikararana. Mba hahak ...
Jay Miner dia Olika voafintina anaty, injeniera mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 31 Mey 1932 tao Prescott, Arizona ary maty ny 20 Jiona 1994 tao Mountain View, Kalifornia
1793: Charles Vignoles - injeniera sivily 1845 1795: Gustave Nicolas Joseph De Ridder - injeniera R. E. B. Crompton - injeniera 1819: Walt Whitman - Poeta, mpanoratra tantara lava, Mpanao gazety, mpanoratra fanoharana, mpanoratra Adolf Bleichert ...
1819: Jacques Offenbach - 1878 1818: Eugenius Birch - injeniera sivily, injeniera 1775: Jacques Frédéric Français - injeniera Arthur Ernest Morgan Franjo Hanaman - injeniera 1815: Charles Antoine Poirée - injeniera 1566: Sigismund III Vasa - 1860 ...
Ny atao hoe fikandra dia zavatra ampiasaina miaraka aminny solosaina ahafahantarana ireo fampahalalana voatahiry ao aminilay solosaina
Microsoft Windows dia mpandrindra milina amboarinny orinasa informatika Microsoft, izay natao ho anireo solosaina mahazaka PC. Io no mpandimby ny MS-DOS. Nanomboka taminny taona 1990 ary indrindra taminny fivoahanny Windows 95, nahita fahombiazan ...
Ny Macintosh, na Mac dia solosaina amboarina ary varotani Apple ary varotani Apple nanomboka ny taona 1984. Ny Macintosh voalohany indrindra, ny Macintosh 128K dia novarotana ny 24 Janoary 1984. Io no solosaina voalohany mampiasa voalavo ary inte ...
Novell dia mpanao rindrankajy ho anny sistema malaza ho anny système dexploitation réseau NetWare nalefa taminny 1983 ho anny solosaina.
POSIX ao computing no niantso ny anaran ny andian ny fitsipika izay mamaritra ny filàna fototra atolotry ny rafi-miasa, ary indrindra ny API misy rafitra antso. Ny namorona ny tanjona dia ny hahazoana antoka mifanentana eo aminny isan-karazany ny ...
Ny iMac dia isan-karazany ny solosaina desktop rehetra-in-iray natao sy vokarina aminny Apple. Izany dia fototra ampahany mpanjifa biraonao solosaina natolotry ny Apple nanomboka ny fampidirana taminny taona 1998, ary efa nivoatra aminny alalanny ...
I Steven Paul Jobs, izay fantatry ny be sy ny maro amin’ny anarana Steve Jobs, dia olom-pirenena amerikanina miasa amina orinasa informatika, mpiara-namorona an’i Apple niaraka tamin’i Steve Wozniak ary Ronald Wayne tamin’i 1976. Efa talen’i Appl ...
Ny fitantanana votoatiny dia vondrom-paika ary tekinôlôjia mandray, mitantana ary mamoaka ny angona. Rehefa tahirizina na takarina aminny alalanny solosaina dia lazaina fa "votoatiny dijitaly" na "votoatiny" ilay zavatra. Ny votoatiny dijitaly di ...
Ny mailaka dia serivisy amin’ny aterineto izay ahafahan’ireo izay manana adiresy mailaka mandefa ary mahazo taratasy elektronika. Ny mailaka dia sahala taratasy alefa amin’ny paositra, saingy izy ireo mandeha haingana kokoa noho ny taratasim-paos ...
Gabe Logan Newell, mahazatra aminny anarany Gaben, dia programmer solosaina amerikanina ary mpandraharaha fanta-daza indrindra aminny anarana hoe mpiara-manorina ny mpamorona lalao video ary orinasa mizara nomerika Valve. Teraka tao Colorado, izy ...
Ny fiteny môre na môôre na môsy dia fiteny ao Borkina Faso teneninny vahoaka atao hoe Mosy. Izy no fiteny be mpampiasa indrindra ao aminio firenena io. Mihoatra ny 15 189 750 aminny 20 252 523 ny isanny olona miteny môre araka ny fanisana natao t ...
Leroy Warriner dia injeniera mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 1 Martsa 1919 tao Indianapolis, Indiana ary maty ny 2 Janoary 2003 tao Indianapolis, Indiana
Jackie Holmes dia injeniera mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 4 Septambra 1920 tao Indianapolis, Indiana ary maty ny 1 Martsa 1995 tao Indianapolis, Indiana
Jason Momoa dia mpilalao, mpamoaka horonantsary, talen-koronantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 1 Aogositra 1979 tao Honolulu, Hawaii
Henry John Kaiser dia injeniera, mpiantoka, mpanao soa ho anny hafa mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 9 Mey 1882 ary maty ny 24 Aogositra 1967 tao Honolulu, Hawaii
Ny abidy koreanina izay azo antsoina ihany koa hoe hangul na Chosŏngŭl dia abidy noforonina hanoratana ny fiteny koreanina. Ny tanjonio fiforonana io dia hampihena ny tsifahaizana manoratra sy mamaky teny any Korea. Nivadika soratra ofisialy ny a ...
Ny fiteny azerbaijaney na fiteny azery na fiteny torka azery dia ao amin ny vondrom-piteny torka ao aminny fianakaviam-piteny altaîka. Ao Kaokazy sy ao amin ny faritra Atsinanana Akaiky no ahitana olona miteny azy, indrindra ao Azerbaijàna sy ao ...
Ny fiteny talisy dia fiteny tenenina ao Iràna, ao aminny faritra atsimonny ranomasina Kaspiana sy teneninireo Talisy ao Azerbaijàna. Ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, ao aminny sampana indô-iraniana, ao aminny zana-tsampana iraniana no ...
Ny Afsarida dia fianakavia-mpanjaka na dinastia izay nanapaka an i Iràna tamin ny taona 1736 hatramin ny taona 1749. Atao hoe افشاریان / Afšâriyân izany amin ny teny persana. Avy any Torkestàna ny Afsara. Taorian ny nahazoan ny Môgôly io faritra ...
Ny Ranomasina Kaspiana dia ranomasina ao Azia Andrefana ivarinanny ony Volga. Tsy mifandray aminny ranomasina hafa izy fa mitokana anaty tany, ka ao avarany ny stepani Azia Afovoany, ao andrefany sy ao atsimony ny tangoron-tendrombohitra ahitana ...
Ny fianakavia-mpanjaka Zanda, izay avy aminny fanjakana kordo-persana, dia nanapaka ani Iràna taminny 1750 hatraminny taona 1794. Atao hoe زندیان / Zandiān izy ireo aminny teny persana. I Karim Khan Zand, izay nitondra voalohany ani Iràna atsimo ...
Ny fiteny nako-dagestaniana na fiteny nako-dagestaney na fiteny kaokaziana avaratra-atsinanana dia iray sady ny lehibe indrindra aminny fianakaviam-piteny telo ao aminny vondrom-piteny kaokaziana, miaraka aminny fianakaviam-piteny abkazo-adigiana ...
Ny fiteny iraniana na fiteny iranika dia vondrom-piteny isan ireo fiteny indô-eorôpeana, zana-pizaràn ny sampana indô-iraniana. Ny vondrom-piteny iraniana dia ahitana indrindra ny fiteny avestika, ny fiteny persiana taloha, ireo fiteny iraniana m ...
Ny fiteny kaokaziana na fiteny ibero-kaokaziana dia ireo fiteny ampiasainny mponina ao Kaokazy izay mizara sokajy telo, dia ireo fiteny kaokaziana avaratra-andrefana, sy ireo fiteny kaokaziana avaratra-atsinanana ary ny fiteny kaokaziana atsimo. ...
Fiteny ao Azia
Ny fiteny ao Azia dia fiteny maro dia maro tenenin ny mponin i Azia, ahitana fianakaviam-piteny sy vondrom-piteny na fiteny manirery maro. Ny fianakaviam-piteny lehibe indrindra hita ao Azia dia ahitana ireo fiteny altaîka, ny fiteny aostrôaziati ...
Ny telefaonina dia fitaovana ampiasaina aminny fifandraisan-davitra izay noforoninny olom-pirenena amerikanina A. Graham Bell taminny 1876. Ny telefaonina dia mampita ny feonolombelona aminny alalanny fiovaovanny zitina na ny rio anaty mpampita a ...
Lia Raiwez Félicien Menu de Ménil Eugène Lapointe Jeanne Brindeau Edward Denny Bacon Mercedes dOrléans Lorado Taft Aymar de La Baume Pluvinel James Ensor James Gillett Antoine Calbet Constantin VI de Constantinople François Guiguet Sidney Paget L ...
Bruce Hutchison Paul Martin athlète Michel Vanderbauwhede Henri Alexandre Chappoulie Lionel Hitchman Connie Gilchrist Ñico Saquito Zhang Xueliang Louis Leprince-Ringuet Boris Davidovitch Berman Donald Ewen Cameron Christian Elling Vítězslav Nezva ...
Heydar Ghiai Iákovos Kambanéllis Luigi Luca Cavalli-Sforza Kurt Blum Milouš Jakeš Armand Jammot André Rousselet Francisco Aramburu Adam Ulam Mel Ferber Georges Aminel Visesio Moeliku Eusebio Tejera Mick Micheyl Bogdan Śliwa Lotte Brott Michel Pey ...
Ny silabera inuktitut dia tarehintsoratra ara-baninteny ampiasainny mponina miteny inuit any Nunavut ary any Nunavik, any Québec. Taminny 1976, nanao azy ho tarehintsoratra ofisialy ho anny fiteny inuit rehetra ny Komisiona ny Fiteninny Inuit Cul ...
The Pentagon dia trano lehibe any Arlington akaikini Washington D.C. Ao aminio trano lehibe io no misy ny departemantanny fiarovani Etazonia. Olona enina arivo sy roa alina no niasa tao taminny taona 2009, olona avy aminny tafika ary sivily. Ny a ...
Ny sambo dia zavatra vitanny olombelona mihafo eo ambonny rano sy afaka mihetsika, entinny mpandeha ao anatiny na tsia. Mamaly ny fangatahana ny fitaterana eo ambonny rano na eo ambonin-drenirano, ary afahana manano asa famokarana isan-karazany t ...
1867: Vladimir Maï-Maïevski - injeniera 1824: Charles Louis Contejean - mpahaisiansan-javaboahary Hans Hilfiker - injeniera 1897: Charles Nelson Pogue - injeniera 1254: Marco Polo - mpanoratra 1879: Joseph Lyons - mpanao politika 1854: Traugott S ...
Marcel Dieulafoy Narcisse Pelletier Francis Carruthers Gould Privat Agathon Benjamin Arthur Hennique Antony Valabrègue Auguste Taccoen Julius Wellhausen Joshua Slocum Edgar Bourloton Miguel Juárez Celman Robert Moffat homme politique Narcisse-Hen ...
Fahaverezana ny fahaizana fiteny
Ny fahaverezanny fahaizana fiteny dia fahaverezanny olona ny fahaizany ny fiteny iray izay tsy vokatry ny aretina. Ny fiteny voakaoka dia na ny fiteny nibeazany, ho anireo izay nifindra monina any aminny tany vahiny ; na ny fiteny nianarany tany ...
Ny Associated Press – Assosciated ny asa fanaovan-Gazety ny fototra sy ny lehibe indrindra, ny masoivohom-baovao ao aminny united states. Ny asa dia manana ny endriky ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra. Efa ...
Ny pôlitika dia ny fomban ny olona miaina ao amin ny vondrona hanapa-kevitra, ny fifanarahana eo amin ny olona mba hahafahany miara-miaina eo amin ny vondrona toy ny foko na tanàna na firenena. Ao amin ny vondrona lehibe, toy ny firenena, ny olon ...
Second de Sainte Thérèse dia mompera Kristianina, martiry trinitera avy ao Espaina, teraka ny 24 marsa 1891 ary maty 31 jolay 1936. I Segundo de Santa Teresa no fiantsoana azy aminny teny espaniola.
"Hianareo no sakaizako, raha manao araka izay andidiako anareo." Raha mamaky ny Filazantsara araka an’i Jaona toko faha 15 isika, dia mahalala tsara fa Jesosy no miteny eto, ary izay itenenany dia ireo mpianany fahizay. Eo amin’ny andininy manara ...
Ny ahmadisma dia fihetsiketseham-panavaozana miozolmana mesianista naorini Mirza Ghulam Ahmad taminny taonjato faha-19 tao Penjab nandritra ny fanjanahan-tany britanika. I Mirza Ghulam Ahmad 1835-1908 dia miozolmana teraka tao Qâdiyân ao Panjab. ...
Filazantsara araka ani Matio
Ny Filazantsara araka ani Matio, na Vaovao Mahafaly araka ani Matio, na Filazantsara nosoratani Matio, dia voalohany ao aminny Filazantsara efatra ao Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Ny lohahevitra ny aminny Fanjakanny Lanitra no hita ho ivon ...
Sakramentanny fivalozana sy ny fampih ..